Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » IJamaica Yamkela iNkonzo eNtsha evela kwiAmerican Airlines
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
IJamaica yamkele inkonzo entsha yomoya evela kwisikhululo seenqwelomoya sasePhiladelphia (PHL) ukuya eKingston's Norman Manley International Airport (KIN) ukusuka kwiAmerican Airlines, ibonelela ngolunye ukhetho olulungele abahambi abavela kuMntla-mpuma ukuya esiqithini. Inqwelomoya yokuqala yanduluka nge-4 kaNovemba kwaye yayibhiyozelwa ngemibhiyozo yemveli ebonisa inkcubeko eshushu nedlamkileyo yesiqithi ekufikeni kwabo eJamaica.
Abameli abavela eJamaica, American Airlines, kunye neFiladelphia International Airport bahlanganisene ukuze bamkele abakhweli abaya eJamaica kwinqwelomoya entsha.
Ezi nqwelomoya zintsha eziya eJamaica zisuka ePhiladelphia zibonelela ngokhetho olongezelelekileyo oluluncedo kubakhenkethi kunye nabemi baseCaribbean abavela kuMntla-mpuma we-US ukuya esiqithini.
Lixesha elifanelekileyo lonyaka lokuchaphazela ukufika kwexesha eliphezulu laseJamaica.
"Sivuyiswa kakhulu ukwamkela le nkonzo entsha evela kumphathi wethu omkhulu weenqwelo moya, i-American Airlines," watsho uMlawuli wezoKhenketho, eJamaica, uDonovan White. “Ezi nqwelomoya zintsha eziya eJamaica zisuka ePhiladelphia zibonelela ngeendlela eziluncedo ezongezelelekileyo kubakhenkethi kunye nabemi baseCaribbean abavela kuMntla-mpuma we-US ukuba baye esiqithini. Ngabantu abaninzi abadiaspora abahlala kulo mmandla, ngoku kuya kuba lula kunangaphambili ukuba babhabhe ngokufanelekileyo ukuya eKingston. Sinombulelo ngakumbi kwi-American ngokusungula le nkonzo yongezelelekileyo ngexesha elifanelekileyo lonyaka ukuchaphazela ukufika kwesizini ephezulu yaseJamaica. "
Abameli abavela eJamaica, American Airlines, kunye neFiladelphia International Airport bahlanganisene esangweni ukuze bamkele abakhweli Ukuya eJamaica kwinqwelomoya entsha, kuqukwa nentaphane yeearhente zokuhamba ezisindleke iihambo zosapho yiJamaica Tourist Board. Ukongeza kwi-ribbon-cutting, bonke babesonwatyiswa ngezandi eziphakamileyo zomculo waseJamaican kunye neepakethi zase-Jamaica ezixhasayo. Ukulunywa okulula, kubandakanywa neepatties zaseJamaican, nazo zatyiswa kwi-Irie Entrée, indawo yokutyela yokwenyani yaseJamaican esePhiladelphia, inika abahambi incasa yesi siqithi. Abakhenkethi baye baphinda bathatha iisampulu zeBlue Mountain Coffee edumileyo yaseJamaica.
NgokukaJim Tyrrell, iGosa eliyiNtloko leNgeniso, kwisikhululo seenqwelomoya saseFiladelphia, iKingston yindawo yokufikela ehlangabezana neekhrayitheriya zezinto ezifunwa ngabahambi banamhlanje.
“Njengokuba abakhweli bephinde baqala uhambo lwabo, ezona ndawo sikhe sabona abantu besiya kuzo zezo
ilanga, isanti kunye namanxweme kunye nabo banokuthi batyelele iintsapho nabahlobo babo,” utshilo uTyrell. “UKingston ujonga zonke iibhokisi. Intle kwaye yayiyenye yezona ndawo ziphezulu ezingancedwanga zosapho kunye nabahlobo ngaphandle kwePhiladelphia. Ngoku banokubhabha bephuma kwisikhululo seenqwelomoya sasekhaya baze baye kubahlobo nakwiilwandle ngokukhawuleza.”
Ekufikeni kwethu eJamaica, iSikhululo seenqwelomoya saseKingston sikaNorman Manley International (KIN) samkele inqwelo moya ngekhanono yamanzi esintu kunye nekhahlela yeflegi, iiflegi zaseJamaican nezaseMelika ziwangawangisa ecaleni kwenye kwindawo yokukhwela inqwelomoya. Amagosa avela kwiBhodi yabakhenkethi yaseJamaica, iSebe lezoKhenketho kunye neJamaica Hotel kunye
I-Tourism Association nayo ibizimase ukubulisa abahambi abehlayo ngelixa umculo odlalwa phezulu uqhubeka ngasemva. Izipho zanikezelwa kubaqhubi beenqwelo-moya kunye nabasebenzi beenqwelo-moya, ngendlela yesiqithi esiyinyani, ukubonisa uxabiso ngenkonzo yabo ngexesha lolwamkelo lolwamkelo.
Iinqwelomoya zeAmerican Airlines 'ezingapheliyo ukuya eKingston (KIN) ngoku zisebenza kathathu ngeveki ngoMvulo/Lwesine/NgeLanga ukusuka ePhiladelphia (PHL) zihamba ngo-9:40AM kwaye zifika eKingston (KIN) ngo-1:32PM. Le nkonzo intsha yaseMelika
Indlela yesibini engamisiyo yeeNqwelo-moya ukusuka kwi-PHL ukuya eJamaica, incedisana neenqwelomoya zemihla ngemihla zomthuthi ezikhoyo ezingamisiyo ukuya eMontego Bay. Iishedyuli zenqwelomoya zinokutshintsha ngaphandle kwesaziso, ngoko ke abahambi bayakhuthazwa ukuba bajonge i-www.aa.com ngeyona shedyuli ihlaziyiweyo.
Ukusukela kule nyanga, iAmerican Airlines iye yahlola inqwelomoya esetyenziswa kwiinqwelomoya eziya eMontego Bay (MBJ) ukusuka kwiidolophu zabo ezinkulu zaseDallas/Fort Worth (DFW), Miami (MIA), nasePhiladelphia (PHL) ukuze basebenzise indawo yabo entsha. -Boeing 787-8 Dreamliner enemizimba kule misebenzi. Umphathiswa usebenza ngeenqwelomoya ezininzi zemihla ngemihla ezingamisiyo ukuya kwindawo evela kwizixeko ezininzi zase-US kubandakanya iMiami (MIA), iNew York (JFK), iPhiladelphia (PHL), iChicago (ORD), iBoston (BOS), iDallas/Fort Worth (DFW, kunye noCharlotte (CLT).